UNks Weliswa Kunene noMnu S’khumbuzo Radebe nendondo: i-Dumisani Ndaba Award.
UMfundi wase-UKZN, uNks Weliswa Kunene, noMsebenzi eNyuvesi, uMnu S’khumbuzo Radebe, baklonyeliswe ngendondo iDumisani Ndaba Award (i-DNA) yi-Alliance for Collaboration in Climate and Earth Systems Science (i-ACCESS) ngegalelo labo ohlelweni lokonga umhlaba i-Habitable Planet Programme (i-HPW).
UKunene usanda kuqeda i-Bachelor of Medical Science Honours in Medical Microbiology, kanti uRadebe uyi-laboratory technician e-Microscopy and Microanalysis Unit (i-MMU) e-UKZN.
I-ACCESS, eyisikhungo esixhaswe yi-Department of Science and Innovation, i-National Research Foundation nezinye, igqugquzela imfundo kwi-Earth Systems Science eNingizimu ne-Afrika, ibeka eqhulwini imfundo yososayensi abasafufusa kulo mkhakha nge-HPW, iba nemicimbi yaminyaka yonke yokukhulisa ngolwazi labo abakhethiwe, ibe nezinhlelo ngamaholidi, imihlangano yokucobelelana ngolwazi, uhlelo lwezikole, uhlelo enkundleni yezokuxhumana nezinhlelo ezehlukene zokuqeqesha abaholi.
I-DNA ihlonipha isakhamuzi saseMgungundlovu nomfundi wakudala wase-UKZN uMnu Dumisani Ndaba, owaqala ukubamba iqhaza ohlelweni i-ACCESS esasengumfundi wagcina esenguthisha eNyuvesi, nowashona kabuhlungu ngoZibandlela wangowezi-2016. Lo mklomelo utholwa yi-“Planeteer”, okungumuntu owake waba sezinhlelweni ze-ACCESS isikhathi eside, waba negalelo elibonakalayo.
URadebe waqala ohlelweni ngonyaka wezi-2015, kwathi uKunene yena ngowezi-2017.
URadebe nabangani bakhe basungula i-HPW encane yezingane zesikole ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal ngowezi-2016 ukugqugquzela uthando lwesayensi entsheni isencane. Wayeyinxusa le-HPW Ongoye ngenkathi efunda khona, wajoyinisa abafundi abaningi wagcina esefundele ukufundisa eze-HPW, wafundisa ezigcawini zokucobelelana ngolwazi eziningi. URadebe wayengusihlalo weKwaZulu-Natal Habitable Planet Student Organisation kusukela ngowezi-2017 kuya kowezi-2019, waqhubeka nohlelo lwezikole kanti uma esefike ophikweni oluse-Westville lwase-UKZN waba yilungu lekomiti elihlela i-HPW e-UKZN, labuye lahlela i-HPW encane ngowezi -2019 ophikweni oluseMgungundlovu. Benozakwabo bazohlela uhlelo lwezikole lwe-HPW encane e-UKZN kulo nyaka.
Ngemva kokuqeda iziqu i-BSc in Micriobiology and Biochemistry, uKunene wafundela ukufundisa i-HPW, waba umholi wabafundi emihlanganweni yokucobelelana ngolwazi emithathu, omunye wawuseLupane State University eZimbabwe. Wayesethimbeni elalihlele umhlangano wokucobelelana ngolwazi wama-29 i-ACCESS HPW e-University of Johannesburg ngonyaka odlule kanti useke waklonyeliswa kaningi emihlanganweni yokucobelelana ngolwazi we-ACCESS, eklonyeliswa ngeminyezane. Kulo nyaka uzobamba iqhaza ohlelweni lokufukula izikole.
Ngenxa yamagalelo abo, uRadebe noKunene bafakwe ohlwini lwe-DNA, bagcina bethole imiklomelo.
‘Ngiyazibongela ukuthola umklomelo we-DNA yango-2020,’ kusho uRadebe. ‘Ngiyazama ukunikela ngesikhathi ukwenza izwe lethu ngcono ngesayensi.’
‘Ngizizwa ngibusisekile, ngiyabonga ukuthola umklomelo ohlonishwayo we-DNA,’ kusho uKunene. ‘Ngibonga ithuba lokuba kwi-ACCESS nelokuthi ngikwazi ukumela isifundazwe sami nenyuvesi.’
URadebe ufisa ukuqhubeka afunde, abhale amaphepha ocwaningo kwisayensi yamanzi olwandle nokuthi abe neqhaza ezindleleni zesayensi yomhlaba. Uthe lo mklomelo uyamkhuthaza ukuthi aqhubeke nokufukula isizukulwane esisha, aqhubeke nocwaningo aluthandayo.
UKunene uhlela ukwenza iMastazi ngalo nyaka kanti uthanda umkhakha wezempilo yomphakathi. Uthi ukuba kwi-ACCESS nokuhlonishwa ngalo mklomelo kuvuselele intshisekelo yakhe yokuthanda ukunikela emphakathini nothando lwakhe olujulile lwesayensi. Wengeze ngelithi lolu hlelo lumkhuthaze ukuthi aqhube izifundo zakhe, wagqugquzela abanye ukuthi benze kanjalo. Ufisa ukusebenzisa ulwazi lwakhe ukuphendlela ososayensi besifazane abancane indlela.